Nagu saabsan - Shanghai Yangli Furniture Material Co., Ltd.
Waxaad isla markiiba dareemi doontaa adeegeena xirfadeed iyo feejignaanta.
U hogaansanaanta falsafada ganacsiga ee sharafta iyo ula dhaqanka dadka si siman, GERISS waxaa ka go’an inay macaamiisha siiso adeegyada ugu tayada wanaagsan.
Waxaan kugu soo dhaweyneynaa inaad soo booqato shirkadeena, warshadeena iyo qolkayaga bandhigga oo soo bandhigay alaabooyin kala duwan oo la kulmi doona rajadaada.
Haddii aad leedahay shuruud looga baahan yahay wax soo saarkeenna, fadlan hadda nala soo xiriir. Waxaan sugeynaa goor dhow in aan kaa maqalno.
Shirkadeena SHANGHAI YANGLI Furniture MATERIAL CO., LTD oo lagu aasaasay 1999, waxay diirada saareysaa qalabka iyo qalabka wax soo saarka qalabka guryaha. Waxaan hadda ka shaqeynaa laba xarumo R&D ah iyo xarumo farshaxan farshaxan oo ku yaal Shanghai iyo Foshan, gobolka Guangdong. Alaabtayada waxaa lagu iibiyaa seddex magac oo sumcad leh:YANGLI, GERISS, NOLOL. Waxay kala yihiin Nidaamka Khaanadda, Isqarxinta qarsoon, Isbarbar dhigista Ball, Miisaska Miisaska, Fariin qarsoon, gacmeedyo, fallaaraha foornada iyo qalabka kale ee qalabka guryaha, kuwaas oo loo isticmaalo qalabka guryaha, armaajooyinka, qalabka guryaha iyo mobilada Wax soo saarkayagu waxay sumcad ku dhex heleen in ka badan 40 dal oo adduunka ah.
Falsafadeena ganacsi waxay ku saleysan tahay mabda'a ah "Round Sky and Square Earth, Tacliinta iyo Barashada", waa odhaah dhaqameed Shiineys ah. Shaqaalaheennu waxay ka dhaxleen oo ay ku nool yihiin mabda 'ah in aan waxba la qaban karin iyada oo aan lahayn heerar iyo heerar, iyo in ganacsigeennu ku habboon yahay in uu u hoggaansamo xeerarka iyo qawaaniinta hawl maalmeedkeenna. Waxaan si xoog leh u dhiirigelinaa hagaajinta joogtada ah iyo horumarinta wax soo saarkayada iyo geeddi-socodka iyada oo xoogga la saarayo anshaxa ganacsiga.
Kadib dadaalkeenii oo dhan ee ku saabsan qalabka qalabka guryaha, oo ay ku jiraan slide-ka, khaanadaha armaajooyinka, qashin-qubka foornada, gacmaha iyo qalab kale, waxaan ka helnay sumcad sare golaha wasiirada Mareykanka, qalabka guryaha adag, qalabka guryaha iyo qeybaha kale.